🥇 ▷ Line Galaxy Xaddiga ugu sarreeya ee qiimeynta 10ka Arrimood ee Zoomka ah ee Ogosto Agoosto ✅
Line Galaxy Xaddiga ugu sarreeya ee qiimeynta 10ka Arrimood ee Zoomka ah ee Ogosto Agoosto
Line Galaxy Saxanka shanta casriga ah ee liiska Zoom-ka ugu caansan ee Ogosto, laakiin Xiaomi waxay sii wadaa iyada oo ay la socoto Redmi Note 7th
Sahan ay sameeyeen soo dhaweyn, websaydhka iyo qiimaha iyo isbarbardhiga badeecada, ayaa shaaca ka qaaday taleefannada casriga ah ee inta badan laga raadsado aaladooda Ogosto. Joogteynta dowladnimada suuqa dhexe, Samsung helay shan telefoonada casriga ah oo leh khadka Galaxy A 2019, taas oo muujineysa baahi weyn oo loogu qabo moodello badan oo la awoodi karo. In kasta oo ay ka sarreysay darajadda, meeshii ugu horreysay waxay sii wadatay iyadoo Redmi note 7-aad, waxay siisaa Xiaomi, oo keenaya mid ka mid ah qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta suuqa maanta.
Galaxy A50 iyo A70 waxay leeyihiin qalab awood leh iyo shaashado waa weyn
Horeba Motorola, kaas oo bilihii ugu horreeyay ee sanadka sidoo kale soo muuqday dhowr moodel oo khadka ah Moto G7, ayaa wali ku jira darajaynta casriga ah ee telefoonada casriga ah ee inta badan la raadiyaa soo dhaweyn jecel Motorola One Vision waa Moto G7 Ciyaar, kuwaas oo, ilaa xiritaanka sahanka, ay u kala horreeyaan, taleefanka gacanta ee ugu horumarsan iyo aasaasiga ah ee ay billowday shirkadda.
Waxaa xusid mudan in uusan jirin taleefan casri ah oo ku jira darajada ugu badan ee la raadiyo bishii Ogosto oo qiimahiisu ka badan yahay $ 2,000.00, isagoo ah seddexda ugu sarreeya oo leh qiime celcelis ahaan $ 1,000.00. Natiijadan waxay muujineysaa oo kaliya in Dhex-dhexaadiyeyaasha taleefannada casriga ah ay horey u leeyihiin jaangooyooyin awood iyo astaamo xiiso u leh inta badan dadweynaha.
Hubi 10-ka taleefanoonnada casriga ah ee ka hooseeya liiska kuwa ugu badan ee la doondoono soo dhaweyn Bishii Ogosto (08/01 to 08/31). Khadadka isku xirka shaxdaan waxay tixraacaan qiimaha la cusbooneysiiyay taariikhda la daabacay maqaalkan:
Tobanka arrimood ee casriga ah ee Zoomka ee Ogosto
Darajo Telefoonka casriga ah Qiimaha ugu wanaagsan cusbooneysiiyay
Kaalinta 1aad Xiaomi Redmi note 7-aad R $ 994.00
Kaalinta 2aad Samsung Galaxy A10 R $ 559.00
Kaalinta 3aad Samsung Galaxy A30 R $ 879.20
4-aad Samsung Galaxy A20 R $ 710.22
5-aad Samsung Galaxy A50 R $ 1,349.10
6-aad Samsung Galaxy A70 R $ 1,599.22
7-aad Motorola Moto G7 Ciyaar R $ 621.33
8-aad Xiaomi Redmi 7 R $ 779.00
Kaalinta 9aad Motorola One Vision R $ 1,529.10
Kaalinta 10aad Samsung Galaxy M30 $ 999
Galaxy Guusha waxaa laga dhaxlaa khadka loo yaqaan ‘Galaxy J’
Kadib Samsung go’aansaday in la mideeyo khadadka Galaxy THE iyo Galaxy J, dhexdhexaadka casriga ah iyo kuwa gudaha soo gala ayaa hada loo yaqaanaa kaliya Galaxy THE (waxaa ku xiga lambarka nooca aad matalayso). Kaalinta labaad ilaa shanaad, moodooyinka soo ifbaxayaa waxay u eg yihiin kuwo baaba’ay Galaxy J5 iyo J7, oo leh qaabayn dheeri ah oo dheellitiran iyo qiimayaal badan oo la awoodi karo.
THE Galaxy A10 waa Galaxy A20, ugu wanaagsan ee lagu meeleeyay Samsungmuujiso shaashad aan kala go ‘lahayn oo U ah 6.2 ”iyo 6.4” siday u kala horreeyaan iyo HD + xalka. Iyagu waa kuwa ugu aasaasiga ah xariiqda, sidaa darteed waxay la yimaadeen isla sideed-processor processor-ga oo soconaya illaa 1.6GHz, laakiin the A20 keenaya 3GB oo RAM ah halkii 2GB oo ah A10, iyo isla 32GB keydin gudaha ah. Bateriga ayaa waliba isbeddelaya, laakiin wuxuu ku sii jirayaa celcelis ahaan heerka sare: 3,400mAh gudaha Galaxy A10 iyo 4,000mAh gudaha Galaxy A20.
HADALKA A10, A20 iyo A30 ayaa ah moodooyinka ugu soo dhowaanaya shaxda Galaxy J
Mar horeba Galaxy A50 iyo Galaxy A70, dhex-dhexaadiye awood badan leh, waxay leeyihiin bandhigyo 6.4 ”iyo 6.7” ah, siday u kala horreeyaan, lehna HD HD + iyo tikniyoolajiyada Super AMOLED. Iyagu waa moodellada ugu wanaagsan ee liiska, oo ay ku jiraan xulashooyinka 4GB ama 6GB RAM, 126GB kaydinta gudaha iyo illaa 2.3GHz octa-core processor. Kuwani waa dejinta u adeegsa inta badan isticmaaleyaasha ku raaxeysta cayaaraha ciyaarta, galaangelida shabakadaha bulshada, qaadashada sawirro saddex-geesood tayo leh oo tayo wanaagsan leh, oo imaatinka dambe ee maalinta xamuulka badan.
Xiaomi waxay u keentaa dalka Brazil qiimo wanaagsan oo lacag ah
THE Xiaomi ayaa ku soo laabatay Brazil sanadka 2018, waxayna umuuqataa, inay hada sii jirto. Astaantu waxay keenaysaa taleefanno casri ah oo leh qaab xiiso iyo qiimo jaban, Redmi note 7-aad Waa tusaalaha ugu fiican. Waxay soo bandhigtay shaashad 6.3 inji ah oo aan xad lahayn oo leh xallin buuxda HD + iyo tikniyoolajiyadda IPS LCD, taas oo ka dhigaysa mid xiiso leh in lagu daawado waxa ku jira xaglaha aan habboonayn. Processor-ka ‘Snapdragon 660’ hadda ma ahan mid hadda jira, laakiin wax ka yar $ 1,000 waa midka ugu wanaagsan ee laga heli karo suuqa.
Waxaan horey u eegnay Redmi Note 7 waxayna soo bandhigaysaa dejooyin xiiso leh oo qiimaha ah
Intaa waxaa dheer waxaa jira 4GB oo RAM ah iyo xulashooyin leh 32GB iyo 64GB oo kaydinta gudaha ah. Kaamirooyinka, Xiaomi waxaa ku jiray laba dareemayaal gadaal ah, midka ugu weyn wuxuu ahaa 48MP, midka ugu weyn ee qiimaha qiimeeya, iyo 5MP sare ee fikradaha qoto dheer.
Redmi 7, taa, waa nooca ugu yar ee Redmi Note 7. Waxay leedahay naqshad isku mid ah oo aan dhameystirneyn sida walaalkeed, laakiin waxay leedahay kaliya HD + xalin. Qalabka processor-ka ayaa ah Snapdragon 632, oo ay la socdaan 2GB oo RAM ah iyo 32GB oo kaydinta gudaha ah. In kasta oo aasaasi ah oo dheeraad ah, Redmi 7 wuxuu soosaaraa laba kamaradood 12MP + 2MP oo leh ilaa 1080p (Full HD) duubitaan.
Quful qiimaynta Zoom
Zoom waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee raadinta tafaariiqda Brazil iyo goobaha isbarbar dhiga qiimaha.
THE soo dhaweyn waa madal baarida iyo isbarbar dhiga qiimaha, mid ka mid ah kuwa ugu caansan dalka Brazil, kaas oo ka caawiya macaamiisha inay had iyo jeer helaan ikhtiyaarka ugu fiican ee badeecada la doonayo.
Tan darteed, soo dhaweyn isbarbar dhig oo tax liiska qiimayaasha kala duwan ee boggaga tafaariiqda ee Brazil, ha ahaato boggaaga ama waxaad u marisaa barnaamijka moobiilka ee Android ama aaladda macruufka.
Liisaska iyo sahaminta raadinta goobta soo dhaweyn, waxaa mudan in la xuso, waxay u adeegaan si ay u ogeysiiyaan akhristaha iyo macaamilka alaabooyinka sida aadka ah looga raadsado madalkooda, oo aan loogu talagalin inay u darajo ugu fiican ama ugu xun.